ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
တရုတ်နိုင်ငံ၌ နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက် သုံးရက်တာ၏ ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်သော ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ရထားစီးခရီးသည်များ စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံရထားပို့ဆောင်ရေးက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့သည့် နှစ် ၃၀ ပြည့်တွင် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးက ရင့်ကျက်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုပိုမိုရှိလာကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြား
ပေကျင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/စိုးမိုး
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ က ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့် China Media Group တို့၏ ပူးတွဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု ကိုဖြေကြားရာတွင် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာမှာ “ပြည်သူ့အတွက်” ၊ “ပြည်သူအားဖြင့်သာ” ဟု ဆိုလိုကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြော
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
ပြည်သူ့အတွက်နှင့် ပြည်သူအားဖြင့်သာ ဟူသော စည်းမျဉ်းသည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွက် အားအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာအဓိပ္ပာယ်လည်းဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပေကျင်းမြို့တွင် COVID-19 အန္တရာယ်အလယ်အလတ်အဆင့်ဧရိယာ နောက်ထပ် ထပ်တိုး
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တွင် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က COVID-19 အန္တရာယ် အလယ်အလတ်အဆင့်ဧရိယာ နောက်ထပ် ထပ်တိုးလိုက်သဖြင့် ယင်းမြို့၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်အလယ်အလတ်အဆင့်ဧရိယာ စုစုပေါင်း ၆ ခုအထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆွန်းရီခရိုင်ရှိ နန်ချိုင်ကျေးရွာကို ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့က စတင်၍ အလယ်အလတ်အဆင့် အန္တရာယ်ရှိသောဒေသအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ကြောင်း စင်တာ၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Pang Xinghuo က ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောခဲ့သည်။
နောက်ဆုံး ပြည်တွင်းကူးစက်မှုအများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည့် ဆွန်းရီခရိုင်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် မွန်းတည့်ချိန်အထိ အနီးကပ်ထိတွေ့မှုရှိသူ ၁,၇၅၀ ဦးကို ခြေရာခံတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် သတ်မှတ်နေရာများတွင် အသွားအလာကန့်သတ်နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း ခရိုင်အစိုးရ ဒုတိယအမှုဆောင် အကြီးအကဲ Zhi Xianwei က သတင်းထောက်များကို ပြောခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃:၀၀ နာရီအထိ တာဝန်ရှိသူများက လူပေါင်း ၁၀၉,၀၀၀ ဦးကို nucleic acid စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများရယူခဲ့ရာတွင် လူ ၁၀၁,၇၀၀ ဦးထံ၌ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းမရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသော စစ်ဆေးမှုရလဒ်များလည်း ထပ်မံထွက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ခရိုင်တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
အဆိုပါခရိုင်တွင် လူအများအပြား စုဝေးနိုင်သည့် စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှုများကို ယာယီဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး အုပ်စုဖွဲ့စားသောက်ပွဲများနှင့် နှစ်သစ်ကူးပါတီပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသလို ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့် ရေကူးကန်များကိုလည်း ပိတ်ထားခဲ့ကြောင်း Zhi က ဆိုသည်။
ကပ်ရောဂါ တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး အရှိန်မြှင့်တင်ရန် ပေကျင်းရှိ ဝန်ထမ်းသစ်များအနေဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပထမဆုံးမဝင်ရောက်မီ သုံးရက်အတွင်း စစ်ဆေးထားသည့် ပိုးကင်းစင်ကြောင်း nucleic acid စစ်ဆေးမှုလက်မှတ် ပြသရန်လိုအပ်ကြောင်း မြူနီစီပယ်အစိုးရ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရှူဟဲကျန့်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-01-01 23:50:27|Editor: huaxia
BEIJING, Jan. 1 (Xinhua) -- Beijing added another medium-risk area for COVID-19 on Friday, increasing the city's total medium-risk areas for coronavirus to six,alocal health official said.
Nancai Village in Shunyi district was upgraded toamedium-risk region starting on Friday, Pang Xinghuo, deputy director of the center, toldapress briefing on Friday.
Shunyi district, where most of the latest locally transmitted cases were reported, had traced 1,750 close contacts by midday Friday. All of them went into quarantine at designated places, Zhi Xianwei, executive deputy head of the district government, told reporters.
By3p.m. Friday, authorities sampled 109,000 people for nucleic acid tests, and 101,700 people tested negative. The results of the rest are yet to come, said the district official.
Zhi said the district has temporarily canceled commercial activities designed for large groups of people, banned group meals and year-end parties, and shut down places like theaters and swimming pools in the district.
To beef up epidemic prevention and control, new employees in Beijing need proof of negative results of nucleic acid tests taken within three days prior to their first day of work starting Friday, said Xu Hejian,aspokesperson for the municipal government, at the press conference. ■
A medical worker is seen ataquarantine hotel in Shunyi District of Beijing, capital of China, Dec. 31, 2020. (Xinhua/Chen Zhonghao)
“ရပ်ဝန်း နှင့် ပိုးလမ်းမ” ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက အေးစက်နေသည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတွက် အနွေးဓာတ်ဖြည့်သွင်းပေးကြောင်း ဝမ်ရိ ပြောကြား
တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ က ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့် China Media Group တို့၏ ပူးတွဲ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု ကိုဖြေကြားရာတွင် “ရပ်ဝန်း နှင့် ပိုးလမ်းမ” ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အစ္စလာမ်မာဘတ် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/စိုးမိုး
တရုတ်နိုင်ငံမှ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ N5 အဝေးပြေးလမ်း ၏ လမ်းပိုင်းအချို့အား ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးမည့် ကူညီထောက်ပံ့မှုစီမံကိန်း စာချုပ်အား ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် အစ္စလာမ်မာဘတ်၌ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ယင်းအမြန်လမ်းရှိ ဆိုးရွားစွာ ပျက်ဆီးနေသော အကွားအဝေး ၆၆ ကီလိုမီတာ ရှိသည့် လမ်းပိုင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်မိန့်ခွန်းကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအနေဖြင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိမ်တိုက်မည်းကြီးများကို ဆောလျင်စွာ တိုက်ထုတ်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီးအနေဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အိမ်အဖြစ် တည်ဆောက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ရှီက မိန့်ခွန်း၌ တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ခေတ်မီဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအဖြစ် အပြည့်အဝတည်ဆောက်ရေး ခရီးစဉ်သစ်ကို စတင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သမ္မတ ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) တည်ထောင်ခြင်း နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ပြည့်မြောက်သည့် အထိမ်းအမှတ် အခါသမလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ CPC ပါတီသည် တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များနှင့် နိုင်ငံ၏ မျှော်လင့်ချက်ကို တည်ငြိမ်စွာ ရှေ့ဆက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်လျက်ရှိသည့် အလွန်တရာကြီးမားလှသော သင်္ဘောတစ်စင်းအဖြစ် သမ္မတ ရှီက ညွှန်းဆိုပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (GDP) သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ယွမ် ၁၀၀ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅.၃၈ ထရီလီယံ) ကျော်လွန်သွားမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယခုနှစ်အတွက် အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှုအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိသော ပထမဆုံးနိုင်ငံကြီးလည်း ဖြစ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်မိန့်ခွန်း၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2020-12-31 19:02:31|Editor: huaxia
BEIJING, Dec. 31 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping deliveredaNew Year speech Thursday evening in Beijing to ring in 2021. Enditem
BEIJING, Dec. 31 (Xinhua) -- People across the world should make joint efforts to drive away the dark clouds of the COVID-19 pandemic at an early date and build the planet Earth intoabetter home for all humanity, Chinese President Xi Jinping said Thursday when deliveringaNew Year speech to ring in 2021 in Beijing. Enditem
BEIJING, Dec. 31 (Xinhua) -- China will embark onanew journey to fully buildamodern socialist country, President Xi Jinping said Thursday when deliveringaNew Year speech to ring in 2021 in Beijing. Enditem
China's GDP expected to exceed 100 trln yuan in 2020: Xi
Source: Xinhua| 2020-12-31 19:19:24|Editor: huaxia
BEIJING, Dec. 31 (Xinhua) -- China's gross domestic product (GDP) is expected to exceed 100 trillion yuan (15.38 trillion U.S. dollars) in 2020, Chinese President Xi Jinping said in Beijing Thursday when deliveringaNew Year speech to ring in 2021.
China has become the first major economy in the world to register positive growth for the year, Xi said. ■
BEIJING, Dec. 31 (Xinhua) -- The year 2021 marks the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China (CPC), President Xi Jinping said Thursday when deliveringaNew Year speech in Beijing.
Xi described the Party asagigantic vessel that leads China forward steadily with people's expectations and the hope of the nation. Enditem
ဘရာဇီးနိုင်ငံ စီးပွားရေးပညာရှင်က တရုတ်နိုင်ငံ ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး အောင်မြင်မှုသည် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အားသာချက်ကို ထင်ဟပ်ပြသနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြား
ဘရာဇီးလီယာ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/စိုးမိုး
ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရီယိုဒီဂျနေရိုပြည်နယ်တက္ကသိုလ် စီးပွားရေးပညာ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အီးလီယက်စ်ဂျက်ဘရီ က ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ကဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထူးချွန်သည့် အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ပြီး ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ၏ အားသားချက်ကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခဲ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။